रोजगार प्रदायक बनाउने 'सिजी इन्स्टीच्यूट' - नेपाल समय
रोजगार प्रदायक बनाउने 'सिजी इन्स्टीच्यूट'
काठमाडौं – सिजी इन्स्टीच्यूट अफ म्यानेजमेन्ट सन् २०१४ मा स्थापित संस्था हो । लिंकोक्विन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त यो संस्था चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको छ। संस्थाले हालसम्म दशौं ब्याचसम्म संचालन गरिसकेको छ।
सिजी इन्स्टीच्यूट अफ म्यानेजमेन्टको लक्ष्य धेरै पैसा कमाउनु भन्दा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेु रहेको सिजी विजनेस युनिट हेडका डाक्टर अक्षय अरोराले बताए।
अचेल ‘एमबीए’ ग्राजुएट गरेका विद्यार्थीहरूमा व्यवहारिक तथा उद्यमशीलताको ज्ञान भने न्यून रहेको गुनासो डा. अक्षय अरोरा गर्छन्। डाक्टर अरोराले यो संस्था एकेडेमिक तथा सर्टिफिकेट डिग्रीकोे लागि मात्र नभई व्यवहारिक तथा उद्यमशील ज्ञानको लागि स्थापित भएको बताए।
‘हामी डिग्रीका लागि मात्र विद्यार्थीलाई पढाउने होइन। उनीहरूमा दक्ष व्यवस्थापकीय तथा उद्यमी क्षमता पनि बढाउनमा बढी केन्द्रीत हुन्छौँ। यस कारण पनि हामीले विदेशी विद्यालयको सम्बन्ध लिएको छौं। जसको कारण विद्यार्थीहरूले नयाँ ज्ञान र थप सीप सिक्न सक्छन्।, उनले भने।
सुव्यवस्थित,विश्वस्तरीय भौतिक सुविधा तथा पूर्वाधार र अध्ययनमैत्री वातावरणको लागि परिचित सिजी इन्स्टीच्यूट अफ म्यानेजमेन्टले छोटो समयमा राम्रो प्रभाव छोड्न सफल भएको छ।
लिंकोक्विन युनिर्भसिटीबाट सम्बन्धन
सिजीले मलेसियाको लिंकोक्विन युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त रहेको छ। लिंकोक्विन विश्वविद्यालयको संसारभर १० वटा देशका कलेजमा सम्बन्धन रहेको छ। साथै यो युकेमा पहिलो एसियन कलेज खोल्ने विश्वविद्यालयसमेत हो। ग्लोबल नेटवर्क भएको विश्वविद्यालय भएको कारण पनि विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पढाइ तथा सिकाइ पाउनुका साथै ती १० देशमा पनि मान्यता पाउँछन्।
क्रेडिट कोर्स मात्र नभई ननक्रेडिट कोर्समा पनि ध्यान
‘विद्यार्थीलाई किताबी किरा मात्र नबनाई व्यवहारिक शिक्षा पनि सिजीआइएमको अर्को प्राथमिकता रहेको छ। विद्यार्थीलाई किताबी किरा र अतिरिक्त क्रियाकलापमा मात्र नभई विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन्छौं।’, डा. अरोरा भन्छन्, ‘आजको सन्दर्भमा हामीले जापानी र चिनियाँ भाषालाई फोकस गरेका छौं। लिडरशीप जस्ता विषयमा पनि ध्यान गराउँछौं। जसले विद्यार्थीमा व्यवहारिक तथा आत्मविश्वास पनि विकास हुन्छ।’
सिजी ग्रुपको ब्याक फोर्स
हाम्रोमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि प्रमुख आकर्षण भनेको ‘चौधरी ग्रुप’ हो । यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि भविष्यमा सिजीमै पनि आवद्ध हुन सहज वातावरण रहन्छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले सिजीमै पनि रोगजारीको लागि स्थान पाउँछन्।
चौधरी ग्रुपको अर्को आकर्षण हो, एन्जल प्लान। विद्यार्थीले ल्याउने कुनै नवीन वा पुरानै प्लान हुन्, जुन प्रभावशाली छ, उद्यमी र रोजगारीमुलक छ भने, त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई एन्जल प्लानको स्किमबाट सिजीले नै लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
सिजी इन्स्टीच्यूटमा छात्रवृत्तिका लागि पनि राम्रो व्यवस्था रहेको छ। छात्रवृत्तिको लागि पाँच तरिका रहेका छन्। जसमा आन्तरिक प्रवेश परीक्षामा पहिलो हुने विद्यार्थी, एकेडेमिक प्रदर्शनीका आधारमा, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापका आधारमा, एक्स्ट्रा एकेडेमीमा जस्तै रिसर्च क्षेत्रमा बढी दक्ष हुने विद्यार्थीका लागि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, तथा अन्तरर्राष्ट्रिय खोज तथा अनुसन्धानका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति रहेका छन्।
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि संस्थाले बिहानीमा ३० जना र संध्यामा २० जना मात्रै लिने गरेको छ। सिजीले वर्किङ्ग विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ। जो दिउँसोको समयमा काममा हुन्छन् उनीहरूलाई संध्यामा साढे पाँच देखि नौं बजेसम्म अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ।
सिजी इन्स्टीच्यूटमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक रहेका छन्। एकेडेमिक स्तरका मात्र नभई कर्पोरेट तथा व्यवसायिक क्षेत्रमासमेत अनुभवी व्यक्तित्वहरुले यहाँ अध्यापन गराउने दाबी संस्थाले गरेको छ।
‘सिजी बाहेक देशकै अन्य ठूला कम्पनी जस्तै शंकर, दुगड, जगदम्बामा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले राम्रो स्थानमा काम गरिरहेका छन्।’ डा. अरोराले भने, ‘कति आफ्नै स्टार्टअप कम्पनी, व्यवसायमा पनि व्यस्त छन्।’
उनले आफूहरुको भिजन नै नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिनु रहेको बताए। आउँदो १० वर्षमा यहाँका विद्यार्थीहरूले नै नेपालमै उद्यमशीलताको विकाश गर्न सक्षम बनाउनु आफूहरुको प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले बताए। उनले अगाडि भने ‘आउनुहोस्, सिजीसँगै अघि बढौँ।’
विद्यार्थीका लागि हेल्पिङ्ग डेस्क
विद्यार्थीलाई विद्यार्थीको रूपमा मात्र नलिई मैत्रीपूर्ण व्यवहार पनि गर्ने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थी जीवनमा आउने विभिन्न मानसिक, शैक्षिक परार्मश, करिअर प्लानिङ्ग, काउन्सिलिङ्ग जस्ता विद्यार्थी केन्द्रित कार्यक्रम पनि रहेको छ।
सनराइजले ३ अर्ब रूपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने...
सिटिजन लाइफको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न